Amazon Prime Student Discount (2020) - Prime Video, Mozika - Fialam-Boly
Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra Amazon Prime?
Ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Amazon Prime dia hanampy ny mpampiasa hahazo tolotra premium ho an'ny vidiny mirary. Amazon no fivarotana lehibe indrindra amin'ny Internet. Izy ireo dia nitondra an'izao tontolo izao tamin'ny tafio-drivotra tamin'ny alàlan'ny serivisin'izy ireo.Ny ecosystem dia manana potika lehibe. Amazon dia manitatra hatrany ireo safidy natolony ny mpanjifany. Ilaina tokoa ny praiminisitra ho an'ny olona tia miantsena amin'ny Internet. Ny traikefa Amazon Prime dia ny hanome anao fahafaham-po bebe kokoa. Ny mpianatra dia mila amazona amin'ny fitaovana, fialamboly ary boky isan-karazany.
Ny programa fihenam-bidy ho an'ny mpianatra dia manampy anao hankafy fitsapana maimaimpoana mandritra ny enim-bolana. Misy endri-javatra fanampiny hafa koa. Hodinihinay ny antsipiriany rehetra momba ny fihenam-bidy amin'ity fanoratana ity. Vakio raha te hahalala bebe kokoa.
Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra Netflix?
Ny fizotry ny fisoratana anarana ho an'ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra dia mahitsy. Izay tafiditra amin'ny oniversite izao dia afaka mankafy izany fihenam-bidy izany. Ianao dia hiafara amin'ny fandaniana vola kely mandritra ny fotoana maharitra. Ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra dia hanampy anao amin'ny fampihenana ny vidin'ny fiantsenana. Safidy tsara hananana amin'ny toekarena mihahena. Mpianatra maro no miatrika olana amin'ny fitazonana ny volany. Ny fihenan'ny mpianatra dia hanampy amin'ny fanatsarana ny toe-javatra. Ireto ny dingana tokony harahinao hisoratra anarana amin'ny fifanarahana Prime.
Ny mpampiasa dia mila manomboka ny tranokala Amazon amin'ny mpanamory azy amin'ny solosaina. Azonao atao ny mitsidika ny tranokala amin'ny solosaina finday, biraonao, na telefaona finday. Mahagaga ny asany amin'ny sehatra rehetra.Azon'ny mpampiasa atao ny manindry ity rohy manaraka ity - https://amzn.to/2YrHxlA . Hitondra anao any amin'ny pejy famandrihana ofisialin'ny mpianatra voalohany izany.
Tsindrio ny bokotra fanandramana fanombohana amin'ny pejy fandraisana. Ho hitanao eo amin'ny zorony ambony havanana amin'ilay tranokala izany. Ny mpianatra dia afaka mahazo fanaterana maimaim-poana mandritra ny roa andro amin'ny zavatra ilaina amin'ny oniversite rehetra. Ny fitsarana maimaimpoana mandritra ny enim-bolana dia mitondra anao amin'ny alàlan'ny fifanarahana fiaraha-miasa.
Raha vantany vao manomboka ny fitsarana ianao dia mila miditra amin'ny tranokala Amazon. Ampidiro ny adiresy mailaka sy ny teny miafina izay mampifandray ny kaontinao amin'ny sehatra.
Ireo mpampiasa izay tsy manana kaonty Amazon dia mila mamorona kaonty vaovao. Zava-dehibe ny fisoratana anarana kaonty hahazoana tombony amin'ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Amazon Prime. Mila mampiditra antsipiriany madinidinika toa ny mailaka, nomeraon-telefaona, anarana ary mamorona teny miafina ianao. Vantany vao manamarina ny kaontinao vaovao ianao dia afaka mitohy ny fizotrany.
Mila mahazo antoka ianao fa manana antsipirian'ny oniversite miaraka aminao. Amazon dia mila manamarina fa mianatra amin'ny oniversite ianao. Hanangona mombamomba azy ireo kely izy ireo. Matetika dia maharitra minitra vitsy ny fizotry ny fanamarinana mandeha ho azy.
Ny fandoavana ny vola amin'ny Internet dia zava-dehibe ho an'ireo mpampiasa te-hisoratra anarana amin'ny fihenam-bidy. Hahetsika ny drafitra aorian'ny enim-bolana, fa mila manome ny antsipirian'ny fandoavam-bola mialoha ianao. Ampidiro ny antsipirian'ny fandoavam-bola hahafahanao manomboka ny fitsarana maimaimpoana. Hahomby tsara izany ho an'ny mpianatra amin'ny ho avy.
Dia izay! Nahavita nanao sonia tsara ianao amin'ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra voalohany amin'ny Amazon amin'ny alàlan'ireto dingana ireto. Ankehitriny ianao dia afaka mankafy ny tombony rehetra azo avy amin'ny serivisy. Manoro hevitra ny tanora mpianatra rehetra izahay hanandrana an'ity fifanarahana ity. Enim-bolana maimaim-poana amin'ny serivisy Amazon voalohany dia afaka manampy anao hitahiry vola be.
Momba ny fihenan'ny mpianatra Amazon Prime:
Amazon dia orinasa an'arivony tapitrisa dolara izay manana toha-mpampiasa marobe. Ny mpianatra sy ny olon-dehibe dia mamorona ampahany betsaka amin'ny mpanjifany an-tserasera. Ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Prime dia fomba iray hamerenany ny mpanjifany. Ankehitriny ianao dia afaka mankafy ny serivisy premium ataon'izy ireo maimaimpoana amin'ity serivisy ity. Tsy mila mandoa denaria iray akory ianao mandra-pahavitan'ny fitsarana enim-bolana. Niara-niasa tamin'ny Sprint goavambe telecom izy ireo mba hahatanteraka izany. Sprint dia mpamatsy tolotra lehibe manerana an'i Etazonia. Ny areti-mifindra coronavirus dia nahatonga ny toe-javatra sarotra tamin'ny rehetra. Mamporisika anao izahay hanandrana ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra hahazoana tombony kely.
Iza no afaka mahazo fihenam-bidy?
Any amin'ny faritra USA ihany no misy ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra. Ny programa mitovy amin'izany dia mandeha erak'izao tontolo izao. Amazon dia nanangana programa ho an'ny tanora any India, izay tsena faharoa lehibe indrindra ho azy. Izay mpianatra mazoto amin'ny anjerimanontolo amerikana voasoratra anarana dia afaka mioty ny tombony azo. Hanamarina ny fisoratana anarana anao i Amazon ary hanome anao ny tombony eo noho eo. Ny mpampiasa dia mila manana kaonty mailaka EDU dot. Ilaina ilaina izany alohan'ny hisoratra anarana.
Tombontsoa amin'ny fihenan'ny mpianatra Amazon Prime:
Amazon dia mikendry ny hanolotra ireo mpianatra amin'ny tombony lehibe mandritra io toe-javatra io. Tsy manampy ny toekarena mandringa, fa ity fifanarahana ity dia manampy firakofana volafotsy. Ireto ny sasany amin'ireo tombony azo amin'ny fampiasana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra.
Ny serivisy prime Amazon dia misy $ 6.49 ho an'ny mpianatra. Matetika, manodidina ny $ 15 isam-bolana ny vidiny. Ny vidiny dia kely kokoa noho ny fihenam-bidy. Mahazo maimaimpoana enim-bolana koa ny mpianatra amin'ity famandrihana ity. Io dia iray amin'ireo fifanarahana tsara indrindra azonao atao amin'ny Internet. Amin'ny ankapobeny ianao dia hanangona vola amina taonina amin'ny fividianana an-tserasera.
Fandefasana haingana sy maimaim-poana:
Tsy misy olona tia mandoa fiampangana fanampiny amin'ny fandefasana. Niezaka i Amazon mba hahazoana antoka fa afaka mitahiry vola kely kokoa ianao. Ny fitsapana maimaimpoana dia hanampy anao hitahiry sarany fandefasana taonina. Ankehitriny dia azonao atao ny mandefa ny entanao rehetra amin'ny alàlan'ity sehatra ity. Manoro hevitra anao izahay hanandrana ny serivisy amin'ny fandefasana haingana ireo zavatra ilaina. Fantatra fa manome lanja bebe kokoa ny fitaovan'ny mpianatra izy ireo.
Prime Music amin'ny fihenam-bidy:
Ny mozika prime Amazon dia tranomboky goavambe misy hira mahafinaritra. Ireo mpampiasa fihenam-bidy ho an'ny mpianatra dia afaka mahazo ny famandrihana latsaky ny $ 1 isam-bolana.Fifampiraharahana mamy ho an'ny lohan'ny bas rehetra ao amin'ny campus. Ankafizo ny mozika avo lenta amin'ny alàlan'ny Amazon miaraka amin'ny drafitra nofonosinao.
Fifampiraharahana manokana ho an'ny mpianatra:
Ianao no mahazo ny fampandrenesana voalohany momba ny fifampiraharahana farany momba ny fitaovana elektronika, boky fianarana, tsakitsaky, fitafiana, fahasalamana ary kojakoja.
Ny fomba fiainan'ny mpianatra dia mitaky anao hampiasa vola amin'ny vokatra marobe. Ireo fifampiraharahana ho an'ny mpianatra ireo dia fanampiny tsara amin'ny fifangaroana.
Mahazo miditra amin'ny fialamboly premium ihany koa ny mpianatra eo amin'ny lampihazo.Azonao atao ny mankafy ny serivisy famakiana Prime sy Prime amin'ny alàlan'ity famandrihana ity. Prime Video dia manana tranomboky midadasika misy atiny tsara kalitao. Ny seho malaza indrindra amin'ny sehatra dia i Tom Clancy's, Jack Ryan. Prime remanome anao fidirana amin'ny boky be dia be maimaimpoana ny doka.
Ireo dia endri-javatra tsara rehetra hananana amin'ny fifanarahana rehetra. Afaka mankafy an'ireny serivisy ireny maimaim-poana ianao mandritra ny enim-bolana voalohany.
Ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra voalohany Amazon dia fandraisana andraikitra tena tsara avy amin'ny orinasa an-tserasera. Amin'ity toro-lalana ity dia nanantena izahay fa hamafa ny fisalasalanao rehetra momba ny famandrihana. Ankafizo ny miantsena an-tserasera amin'ny vidiny mirary.
Kaonty Netflix maimaim-poana 2020
Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra?
Chihayafuru Vanim-potoana faha-4: Nohamafisina sa Nofoanana ve ny Famotsorana?
Ny haren'i Jenna Jameson - taona, asa, fiainana tany am-boalohany & maro hafa!
Fortnite Metaverse: Manakaiky kokoa ny Metaverse
Tantara Hiempo ny fonao Zazavavy ao amin'ny lakaly
Horizon Forbidden West: Daty famoahana: Trailer, Gameplay | Fanazavana fanampiny!
Aztech: Andriamanitra hadino - Daty famoahana & Trailer
6 Fampiharana TV mivantana tsara indrindra ho an'ny Android sy iOS
Pris da Motta dia nijoro tamin'ny tolo-kevitr'i Yokohama taorian'ny drafitry ny dolara sy ny fankatoavan'i Flav
Molly Yeh Net Worth - Taona, Asa, Fiainana tany am-boalohany & More!
Diablo 4 - Inona ny toetry ny tohiny?
Faly ve ianao amin'ny sarimihetsika Marvel Avengers 5 manaraka?
kaody lalana taloha an'ny roblox
www mijery sarimihetsika maimaim-poana
azo antoka ve ny mampiasa bluestacks
fandaharana amin'ny fotoana rehetra com mampihetsika kaody roku
spotify ho an'ny mpianatra manana hulu
fon'ny mpiorina ranomasina
windows 10 ho an'ny mpianatra fihenam-bidy